Ny onjam-peo ultrasonic dia karazana onja mekanika izay avo kokoa noho ny an'ny onjampeo ny onjampeo. Izy io dia novokarin'ny vibration of transducer eo ambanin'ny fientanam-po malefaka. Izy io dia manana ny mampiavaka ny haavo matetika, ny halavan'ny halavan'ny fohy, ny fisehoan'ny diffraction kely, indrindra ny directivity tsara, ary mety hiparitaka amin'ny taratra.
Fanaparitahana ultrasonicNy fitaovana dia fomba fanaparitahana mahery vaika izay azo ampiasaina amin'ny fanandramana laboratoara sy fitsaboana kely rano. Apetraka mivantana amin'ny sehatry ny ultrasonika izy io ary ampiarahin'ny ultrasonika mahery vaika.
Fitaovana fanaparitahana ultrasonika dia misy ny fantsom-pandehanana manara-penitra, ny famatsiana herinaratra mitondra fiara ary ny vilany setroka. Ireo singa mihozongozona ultrasonic dia ahitana indrindra ny transducer ultrasonic mahery, tandroka ary lohan'ny fitaovana (lohan'ny fandefasana), izay ampiasaina hamokarana ultrasonic ary hamoahana ny angovo kinetika ao anaty rano.
Ny transducer dia mamadika ny angovo elektrika miditra amin'ny angovo mekanika, dia ny onja ultrasonika. Ny fisehoany dia ny transducer mihetsika mandroso sy miverina amin'ny lalana longitudinal, ary matetika ny amplitude dia amina microns vitsivitsy. Ny hakitroky ny amplitude toy izany dia tsy ampy hampiasaina mivantana.
Ny tandroka dia afaka manitatra ny amplitude mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny famolavolana, manasaraka ny vahaolana amin'ny réaction sy ny transducer ary manamboatra ny rafitra hozatra ultrasonic iray manontolo. Ny lohan'ny fitaovana dia mifamatotra amin'ny tandroka, izay mamindra ny fihoaram-pefy ultrasonic mankany amin'ny lohan'ny fitaovana, ary avy eo ny angovo ultrasonic dia ampitaina amin'ny ranon-javatra simika avy amin'ny lohan'ny fitaovana.
Fitandremana amin'ny fampiasana fitaovana fanaparitahana ultrasonic:
1. Tsy azo herinaratra sy ampiasaina matetika mandritra ny adiny 1 mahery ny fitoeran-drano raha tsy ampiana rano ampy.
2. Ny milina dia tokony hapetraka amin'ny toerana madio sy fisaka hampiasana azy, ny akorany dia tsy tokony hofafazan'ny rano, raha misy, dia tokony hamafa madio amin'ny fotoana rehetra hialana amin'ny fifandonana amin'ireo zavatra mafy.
3. Ny tanjaky ny herinaratra dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny marika eo amin'ny masinina.
4. Amin'ny dingan'ny fiasana, raha te hijanona tsy hampiasa ianao dia tsindrio ny switch tokana.
Ity voalaza etsy ambony ity no entin'i Xiaobian aminao anio, manantena ny hanampy anao amin'ny fampiasana tsara kokoa ny vokatra.